#ကျောင်းသားသပိတ်အား ထောက်ခံသည့် လူထုလှုပ်ရှားမှု #ရန်ကုန်။ | democracy for burma
#ကျောင်းသားသပိတ်အား ထောက်ခံသည့် လူထုလှုပ်ရှားမှု #ရန်ကုန်။
tags: (တောင်တွင်းကြီးသို, 09796582941, 8.FEBRUARY, ရန်ကုန်, အသေးစိတ်စုံစမ်းမေးမြန်ရန်, ကျောင်းသားသပိတ်အား ထောက်ခံသည့် လူထုလှုပ်ရှားမှု, Burma, DAY 17, Myanmar, NNEER, Rangoon, student, Support, Taung Dwin Gyi, Yangon
ကျောင်းသားသပိတ်အား ထောက်ခံသည့် လူထုလှုပ်ရှားမှု (ရန်ကုန်)။
ဒီမိုကရေစီပညာရေး ကျောင်းသားသပိတ်အား ထောက်ခံသော ပြည်သူလူထုကြီးခင်ဗျာ။
ကျွန်တော် ကျွန်မတို့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား/သူများမှ ဦးဆောင်ပြီး ဒီမိုကရေစီပညာရေး ကျောင်းသားသပိတ်အား ထောက်ခံသည့် လူထုလှုပ်ရှားမှုကို ရန်ကုန်မြို့တွင် အောက်ပါအတိုင်း ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသောကြောင့် ကျောင်းသားသပိတ်ကို ထောက်ခံသူအပေါင်း ပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံ တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
နေ့ရက် – ဖေဖေါ်ဝါရီ (၈) ရက်နေ့၊ ၂၀၁၅ (တနင်္ဂနွေ)။
အချိန် – နံနက် ၁၀ နာရီ။
စတင်မည့်နေရာ – တာမွေအ၀ိုင်း (ဗိုလ်စိန်မှန်ကွင်းဘေး)။
မောင်အောင်သောင်း (အနုပညာတက္ကသိုလ်) ။ ။ 09796582941
မောင်သင့်မြတ် (နည်းပညာတက္ကသိုလ်သန်လျင်) ။ ။ 09798406274
မောင်ကျော်ဇင်လင်း (ဒဂုံတက္ကသိုလ်) ။ ။ 09972986131
မသစ္စာ (ဒဂုံတက္ကသိုလ်) ။ ။ 09974136028
လင်းထက်နိုင် (ခ) ဂျိမ်းစ် (ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ်) ။ ။ 09448010746
“” သပိတ်သပိတ် မှောက်မှောက် ၊ အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည် ၊ တပြည်လုံးရှိ ကျောင်းသား၊ပြည်သူ ညီညွတ်ကြပြီ၊ခွပ်ဒေါင်းအလံတပြည်လုံးလွှင့်နေကြပြီ၊””
DAY -17:Democratic Student Long March to Taung Dwin Gyi (တောင်တွင်းကြီးသို့ ).5/2/2015
.The braved students are too tired and extremely sunburned but strongly committed to continue long marching to RANGOON .They are determined to reach their goal .The students are very pleased and happy to carry out their long march . The locals always support the students.This isaHISTORICAL VICTORY .There are many student groups from every DISTRICT joining the main body .
The students will be in the street to regain their 11 point demand.
The students are united .
The public supports is excellent !
← #Burma #Myanmar #slams #UN for #using #term #Rohingya’
#Ta’ang National Liberation Army (TNLA) #fought #against #Burma #Army for #two #days #STATEMENT #TWO →